Ukubulawa Kwazama Ukuphelisa Iintetho Zoluxano lwaseMiddle East
NgoNovemba 4, 1995, uNdunankulu wase-Israel uYitzhak Rabin wadutshulwa wabulawa nguYigal Amir owayengumYuda ekupheleni kwintlanganiso yoxolo kwi-Kings of Israel Square (ngoku kuthiwa yiRabin Square) eTel Aviv.
Uxhoba: Yitzhak Rabin
U-Yitzhak Rabin wayeyinkulumbuso kaSirayeli ukususela ngo-1974 ukuya ku-1977 kwaye kwakhona ukususela ngo-1992 de wafa ngo-1995. Ngeminyaka engama-26, uRabin wayelungu lePalmach (inxalenye yomkhosi wamaYuda angaphantsi komhlaba ngaphambi kokuba amaSirayeli abe ngurhulumente) kunye ne-IDF (umkhosi wase-Israel) kwaye wavukela amaqela ukuba abe yiNtloko yeBasebenzi be-IDF.
Emva kokuthatha umhlala-phantsi kwi-IDF ngo-1968, uRabin wamiselwa ukuba abe nguMmeli wase-Israel eMelika.
Emva kokubuyela kwaSirayeli ngo-1973, uRabin waba ngumsebenzi kwiQumrhu lezabasebenzi waza waba ngumbongameli wesihlanu wakwaSirayeli ngowe-1974.
Ngexesha lakhe lesibini njenge-prime minister of Israel, uRabin wasebenza kwii-Oslo Agreements. Ingqinamba e-Oslo, eNorway kodwa isayinwe ngokusemthethweni eWashington DC ngoSeptemba 13, 1993, ii-Oslo Izivumelwano zaqala ukuba iinkokheli zase-Israel nePalestina zikwazi ukuhlala kunye kunye nokusebenzela uxolo loqobo. Ezi ngxoxo zazifuneka zibe yinyathelo lokuqala ekudaleni urhulumente wasePalestina.
Nangona izivumelwano ze-Oslo zanqoba uNdunankulu wase-Israel uYitzhak Rabin, uNgqongqoshe wamazwe angaphandle akwa-Israyeli uShimon Peres, kunye nenkokheli yasePalestina Yasser Arafat ngo-1994 iNobel Peace Prize, imiqathango ye-Oslo Agreements yayingathandeki kakhulu namaSirayeli amaninzi. Omnye onjalo u-Israel nguYigal Amir.
Uneminyaka engamashumi amabini anamihlanu uYigal Amir wayefuna ukubulala uYitzhak Rabin ngeenyanga. U-Amir, owayekhulile njengomYuda wama-Orthodox kwaSirayeli kwaye wayengumfundi wezomthetho kwiYunivesithi yeBar Ilan, wayemelene ngokupheleleyo ne-Oslo Agreements kwaye wayekholelwa ukuba uRabin wayezama ukunika amaSirayeli ama-Arabhu.
Ngaloo ndlela, u-Amir wayebonile uRabin njengomgqirha, utshaba.
Unqume ukubulala uRabin kwaye ngethemba lokuphelisa intetho yoxolo lwamaMiddle East, u-Amir wathatha ibhotile yakhe encinci, emnyama, i-9 mm ye-Beretta ngokuzenzekelayo kwaye wazama ukusondela kuRabin. Emva kokuzama kwamanani amaninzi, u-Amir wathola inhlanhla ngoMgqibelo, ngoNovemba 4, 1995.
KwiiKumkani zakwaSirayeli kwiTel Aviv, kwaSirayeli, uxolo lwentlalo ekuxhaseni iingxoxo zoxolo zikaRabin lwaluqhutywa. URabin wayeya kuba khona, kunye nabaxhasi abangama-100,000.
UAmir, owayezibiza njengomqhubi weVIP, wayehlala engabonakali ngumvelisi weentyatyambo kufuphi nemoto kaRabin njengoko wayelindele uRabin. Amajelo okhuseleko awazange aphinde ahlolisise ubunikazi buka-Amir okanye abuze ibali lika-Amir.
Ekupheleni komhlangano, uRabin wehla phantsi kweesitebhisi, ephuma kwiholo yeedolophu ukuya emotweni yakhe yokulinda. Njengoko uRabin wadlula u-Amir, obemi ngoku, u-Amir washaya umpu wakhe eRebin. Amacwecwe amathathu adlala kwibala elikufutshane.
Iibhothi ezimbini zithatha uRabin; enye ibetha ukhuseleko uJoram Rubin. URabin wagijimela kwisibhedlele saseSylov esikufutshane kodwa amanxeba akhe ayenzima kakhulu. Ngokushesha uRabin wachazwa efile.
Ukubulawa kwabantwana abaneminyaka engama-73 ubudala, uYitzhak Rabin, bamangalisa abantu bakaSirayeli kunye nehlabathi. Ngokwesiko lamaYuda, umngcwabo wawufanele uqhutywe ngomhla olandelayo; nangona kunjalo, ukwenzela ukuba bafumane inani elikhulu leenkokeli zehlabathi ezazifuna ukuza zihloniphe, umngcwabo kaRabin waxoshwa emva komnye usuku.
Kuyo yonke imini nobusuku ngeCawa, ngoNovemba 5, 1995, kulinganiselwa ukuba abantu abayizigidi ezidlulileyo ebhokisini likaRabin njengoko bebekwe kwilizwe ngaphandle kweKnesset, isakhiwo sepalamente kaSirayeli. *
NgoMvulo, ngoNovemba 6, 1995, ibhokisi likaRabin lafakwa kwinqwelo yempi eyayikhishwe emnyama ize iqhutywe ngokukhawuleza iikhilomitha ezimbini ukusuka eKnesset ukuya emangcwabeni omkhosi waseNtaba iHerzl eYerusalem.
Emva kokuba uRabin wayekho emangcwabeni, i-Israel yayibetha, inqanda wonke umntu ngomzuzu omibini wokuthula ngozuko lukaRabin.
Ngokukhawuleza emva kokudubula, uYigar Amir wabanjwa. UAmir wavuma ukubulala uRabin kwaye akazange abonise naluphi na ukuzisola. Ngo-Matshi 1996, u-Amir watholakala enetyala waza wagwetywa ejele entolongweni, kunye neminyaka eyongezelelweyo yokudubula umkhuseli.
* "Iiplabathi zeHlabathi zeRabin Funeral," i-CNN, ngoNovemba 6, 1995, iWebhu, ngoNovemba 4, 2015.
I-Admission St. Mary's College
Ukuhlaziywa koMfundi oPhuthumayo
Yintoni eyenzekayo Ukuba kukho umtya kwiKholeji yoNyulo?
Igalari yezithombe zegalari
Umzekelo Isivakalisi seVesi